I-Xiaomi Mi A2 Lite: Ifowuni entsha yeXiaomi ene-Android One | I-Androidsis
Kwiiveki ezimbalwa silinde ukumiliselwa kweXiaomi Mi A2. Yimodeli yesibini yeXiaomi yokusebenzisa i-Android One njengenkqubo yokusebenza. Le modeli iya kusekelwa kwi-Mi 6X eboniswe kule ntwasahlobo idlulileyo. Nangona kubonakala ngathi isixhobo asizukufikelela kwimarike yodwa, kuba iXiaomi Mi A2 Lite entsha iye yavuza.
Njengoko igama layo libonisa, iXiaomi Mi A2 Lite ithembisa ukuba yinguqulelo ethobekileyo yeMi A2. Kubonakala ngathi iya kuba lilandela lokwenyani kwi-Mi A1 yonyaka ophelileyo, njengoko iMi A2 iyixhuma elikhulu ngokomgangatho kunye neenkcazo.
Kude kube ngoku, bekungaziwa malunga nobukho beli modeli yohlobo lwesiTshayina. Kodwa ngequbuliso Sele sihlangabezana neenkcukacha zakho. Njengoko sikuxelele, iya kuba yinguqulelo ethozame ngakumbi kuneMi A2, kwaye ngandlela thile isondele kwifowuni yonyaka ophelileyo.
Kulindelwe ukuba Le Xiaomi Mi A2 Lite iya kuba nescreen se-intshi eyi-5,84 nge-19: 9 ratio, Oko kuthetha ukuba siza kuba notch kwimodeli. Njengomprosesa bakhethe i-Snapdragon 625, eya kuhamba kunye ne-64 GB yokugcina ngaphakathi. Ke ngekhe kubekho mahluko kwimodeli yonyaka ophelileyo ngokwamandla.
Hayi kakhulu kumfanekiso wokufota, onefayile ye- Ikhamera engasemva eyi-12 + 5 MP kunye nekhamera engaphambili eyi-5 MP. Into ethozamileyo kuneMi A1 yile Xiaomi Mi A2 Lite. Kodwa sinokulindela ukutsiba okuphawulekayo kwimigqomo. Kuba kule modeli iya kuba yi-4.000 mAh, eya kuthi inike abasebenzisi uninzi lokuzimela.
Ngexabiso, Kukho amarhe okuba le Xiaomi Mi A2 Lite iya kuba nexabiso elimalunga nama-250 euros. Kodwa kuya kufuneka silinde inkcazo-ntetho yayo ukubona ukuba iyinyani na okanye hayi. Nge-24 kaJulayi iMi A2 izakufika, siza kubona ukuba nayo iyafika nale modeli intsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » Ukucoca iXiaomi Mi A2 Lite entsha
Amanqaku eFirefox: Inyathelo ngenyathelo-ngesikhokelo sokufakwa kunye nendlela yokuyisebenzisa kwi-PC nakwi-Android